ခေတ္တနားခိုခြင်းသည်းခံပါ (ဂျယ်ရီ ၊ ၁၉၇၇ ) | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး မျှဝေသည်၊ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၆
ဂျယ်ရီ (၁၉၇၀ ခုနှစ်များ)
Original English Song: It never rains in Southern California by Albert Hammond (1972).
တေးစု အချက်အလက်များ ရှာမရသေးပါ။ ဟန်တင် ၏ ၁၉၇၇ ခုနှစ် တဝိုက် ထွက် တေးစု တခုမှာ ဧည့်သည် အဖြစ် ဝင်ရောက် သီဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုသာ သိရသည်။
၂၀၁၂ ခု၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ တွင် ကွယ်လွန်သွားရှာခဲ့သည့် မန္တလေး ၇၀ ခုနှစ်များ “Excitement” နှင့် ၈၀ ခုနှစ်များ “The Shells” ၏ နာမည်ကျော် လိဒ် ဂစ်တာ သမား၊ ဂီတမှူး၊ ဂီတပညာရှင် ကိုဂျယ်ရီ အမှတ်တရ..။
Credit and Warning Messages
Audio: Credit with Big Thanks to Ko Kyaw Myint.
Ko Jerry’s Photo: Credit with Big Thanks to Aunty Cho @ Juliana Sao and Ko Min Min Soe
Disclaimer: I do not own the rights to this song and any material of the contents of this music video.
Copyright @ Original Song Writer for tune, Burmese Version Song Writer for lyrics, Singer: Ko Jerry (Hist Surviving Wife and Next of Kin) for his vocal and Other Rightful Owner(s).
This is “Personal and Non-Commercial Use ONLY”.
ဝင်ရောက်.. နားခို.. ထွက်ခွာ.. ပြေးသော.. မိန်းကလေး.. တယောက် .. အကြောင်း..
ပင်အို.. ရိပ်မှာ.. မိန်းမလှလေးရဲ့.. အမုန်း.. ခြေရာ..
သြော်.. ဖျက်ပေါ့.. ကိုယ့်.. ဘဝ.. ပန်းချီကား..
တဖြည်းဖြည်းပေါ့.. ကြဲ.. ပြန့်ခဲ့ပြီ..
ပင်အိုရိပ်ကို.. စွန့်ခွာသွားတယ်.. ခါးသီး..မုန်းတီးသလား..
ယာယီ.. နားခိုခြင်းကို.. မုန်းတယ်.. သည်းခံပါ..
အချစ်မရှိသူ.. ပျောက်ကွယ်.. မိန်းမငယ်.. မေရယ်..
ရင်နာစွာ.. ပြောလိုက်မိမယ်.. အကြင်နာကို.. မေ့ပျောက်လွယ်..
ယာယီ.. သဘော.. အညှာ.. မတည်သော.. အချစ်များ..
ကိုယ်တော့.. မလိုချင်ကွယ်.. တကယ်.. ရင်ထဲဝယ်..
အချစ်စစ်.. တရား.. နဲ့.. ပြန်လာခဲ့ကွယ်..
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:MoeMaKa VDO, Radio Program, ငြိမ်းချမ်းအေး